Shina fofom-boaloboka fandroana fatratra 40g fofonaina fanomezana ho an'ny fetin'ny Andron'ny mpifankatia sy orinasa | Mengjiaolan
1.Ny baomba mandro manjelanjelatra ny fonay dia manome anao sy ny olon-tianao traikefa mahafa-po sy manitra aromatherapy ao an-trano. Izy ireo dia misy menaka esansiela voajanahary ary misy vokany aromatherapy, mahatonga anao hahatsapa tena mahazo aina amin'ny fandroana.
2.Ny baomba mandro 40g mamiratra dia manana endrika am-po, izay malaza amin'ny ankizivavy ary mety amin'ny Andron'ny mpifankatia na fanomezana fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Ho an'ny havana, olon-tiana ary namana, mety safidy tsara izany.
3.Ny baomba mandro mamirapiratra miendrika fo dia afaka manamaivana ny tsindry ao amin'ny fandroana, mampiala ny sainao sy ny sainao ary mamorona rivo-piainana milamina sy mahafinaritra. Na dia amin'ny tontolo misy tsindry mafy aza, ny bubble dia afaka miala sasatra tanteraka amin'ny vatanao sy ny sainao.
Ny baomba fandroana manjelatra fontsika dia misy menaka esory avy amin'ny akora voajanahary, izay afaka manatsara ny hoditra amin'ny fomba mahomby ary mampiroborobo ny fivezivezy. Eo ambanin'ny rivo-piainana mihenjana, miala sasatra ary mando ny hoditra. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny fanadiovana, afaka manadio ny keratin'ny hoditra, mametraka azy anaty rano mafana, dia hamoaka sombin-tsofina maneno.
5. baomba mandro mamirapiratra endrika endrika mety amin'ny olona rehetra, ho an'ny lehilahy, vehivavy sy ankizy te-handro dia azo ampiasaina soa aman-tsara. Ary mety amin'ny karazana hoditra voajanahary, tsy misy poizina, baomba mandro vegetarian isika.
Bomba fandroana manjelatra 1.Heart dia baomba ara-pahasalamana sy manalefaka, miendrika fo izy ireo, tian'ny ankamaroan'ny zazavavy, misy akora voajanahary, mety amin'ny hoditra tsy miandany / maina, azo antoka ampiasaina.
2.Amin'ny rivo-piainana manjavozavo na amin'ny tontolo iainana miasa mafy, dia afaka manamaivana ny adin-tsaina izany ary miala sasatra amin'ny vatana sy saina.
3. Rehefa avy nandro, ny fofony manitra dia hameno ny efitranonao ary hamerovero ny efitranonao.
4.Mora ny manadio, manadio avy hatrany aorian'ny fisasana, sahaza ny olona rehetra izay tsy te-hanadio.
Teo aloha: Baomba fandroana fiaramanidina 150g ho an'ny ankizy miaina traikefa voajanahary
Manaraka: 120g voajanahary vita tanana vita amin'ny bozy fandroana rozy vita amin'ny raozy mba hiala sasatra
Baomba mandro Apple
Baomba mandro zaza
Kitapo fanomezana ho an'ny baomba mandro
Baomba baomba mandro
Savony baomba mandro
Baomba mandro marobe
Baomba mandro manokana
Baomba fandroana endrika voninkazo
Baomba mandro mandro
Baomba mandro voajanahary
Baomba mandro fonosana
Baomba mandro manitra
Baomba mandro avana 120g baomba tena ilaina amin'ny tanana ...
Baomba mahafatifaty vehivavy 110g baomba mandro vita fandroana vita tanana ...
Baomba mandro kely 60g mamy ho an'ny spa fandroana wi ...
Magic 90g baomba manjelanjelatra manjelatra unicorn ho ...
Ny hoditra maina dia manalefaka ny romantika loko telo 150g ...
Baomba mandro amin'ny molotra 150g fizzie ho an'ny zazavavy sy ...
Napetraka fanomezana Krismasy, Fizera fandroana, Fanomezana Spa Bath, Fitaovana fanomezana Spa Bath, Fanomezana fanomezana spa fandroana spaoro, Fanomezana fanomezana ho an'ny Spa Spa,